गोप्य अंगमा किन ट्याटु खोपाउछन् नेपाली युवतीहरु ??? – SamajKhabar.com
गोप्य अंगमा किन ट्याटु खोपाउछन् नेपाली युवतीहरु ???
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १५ पुष २०७४, शनिबार ०७:२२
स्वअभिव्यक्तिको सुन्दर माध्यमका रुपमा लिइने ट्याटुको क्रेज नेपालमा प्रतिदिन बढिरहेको छ । आफ्नै शरीरलाई कलाको क्यानभास बनाइने ट्याटु–क्रेज आश्चर्यलाग्दो गरी बढ्दै छ । नेपालमा ट्याटु देखिने अंगमा खोप्ने मात्र होइन, शरीरको गोप्य भागमा अंकण गर्ने प्रचलन पनि उत्तिकै छ । विशेषगरी युवतीहरुले गोप्य भागमा विभिन्न डिजाइनका ट्याटु खोपिरहेका छन् । किन खोपिरहेछन् कसैले नदेख्ने ठाउँमा ? शरीरका संवेदनशील तथा गोप्य अंगमा खोपिने ट्याटु ट्रेन्डमाथि अनिल यादवले तयार पारेको सामग्री ।
‘दाइ, ट्याटु हान्नुपर्यो ।’ सोमबार दिउँसो ओठ छेडेकी एक युवती काठमाडौं, वसन्तपुरको काठमाडौं इन ट्याटु हाउसमा थोरै मुस्कुराउँदै छिरिन् ।
माेडल : वर्षा लामा / तस्बिर : रूकेश क्षेष्ठ
काठमाडौं, लाजिम्पाटको एक डान्सबारमा कार्यरत नुवाकोटकी डान्सर वर्षा लामाले पाँच महिनाअघि ढाडको माथिल्लो र मुनि दुवै भागमा ट्याटुु खोपाएकी छन् । ‘सुरुमा ट्याटु भन्नेबित्तिकै हेट लाग्थ्यो, पछि मसँगै काम गर्ने एकजना दिदीको ट्याटु देखेर मलाई पनि खोप्न मन लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘एकजना चिनेको दिदीको छोरालाई कोठामै बोलाएर खोप्न लगाएँ । दुइटा हान्दा पाँच हजारतिर खर्च भयो होला ।’ उनले आफूले ट्याटु अरुका लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि हानेको बताइन् । ‘नढाँटी भन्नुपर्दा सेक्सी देखिनलाई ट्याटु हानेकी हुँ, कहिलेकाहीँ छोटो लुगा लगाउँदा मेरो ट्याटु देखिन्छ त्यतिबेला मान्छेहरु मलाई घुरेर हेर्छन्,’ उनले सुनाइन् । फूलको बीचमा लभ लेखिएको ट्याटु खोपाएकी उनलाई अब कम्मरमा खोपाउने रहर रहेछ ।
-शुक्रबार साप्ताहिकबाट साभार
१५ पुष २०७४, शनिबार ०७:२२ मा प्रकाशित